Mitrandraka Gingko Biloba tsara indrindra mpamokatra sy mpamokatra 24% 6% | CCGB
Gingko Biloba mitrandraka 24% 6%
Miaraka amin'ny tombotsoan'ny orinasa Yunnan dia mividy fitaovana tsy misy kalitao avo lenta izahay nefa tsy misy residu famonoana bibikely hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra. Miaraka amin'ny fitaovana fanodinana mandroso sy ny tsipika famokarana mitohy lehibe, nohatsaraina ihany koa ny tombony vidinay.
Fitrandrahana mifanohitra tsy tapaka, vidin'ny fanodinana ambany
Loharano botanical: Ravina Ginkgo Biloba
Famaritana: 24% / 6%; Asidra ginkolika <5ppm
Mpanamboatra lisitra Ginkgo Biloba nalaina lisitra misy vidiny ambongadiny
☆ Mety hanitatra ny sambo koronaly sy ny atidoha
☆ Fanamafisana ny fifehezana ara-batana ny lalan-dra, fanamaivanana ny vasospasm ary ny fomba hafa hampitomboana ny famatsian-dra ny fo sy ny ati-doha,
☆ Ny soritr'aretina mampihetsi-po amin'ny aretim-po sy ny angina pectoris, manala ny soritr'aretin'ny ceremia
☆ Amin'ny alàlan'ny antagonizing platelet activating factor, ny fitrandrahana dia mety hampihena ny viscosity amin'ny rà, ary ny fanangonana trombona sy ny trombosis amin'ny alàlan'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny trombosis cerebral ary ny infarction myocardial.
☆ Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny microcirculation sy ny fanafoanana ny radika maimaim-poana, dia afaka manatsara ny fampiroboroboana ny metabolisma ny sela fo sy ati-doha, manatsara ny fitadidiana ary manatsara ny fitohizan'ny lalan-dra
Fampitahana ny fenitry ny vokatra ny ginkgo biloba ravina ravina
Halaviro ny hazavana sy ny hafanana mahery; amin'ny toerana mangatsiaka sy maina; fonosana feno sy tery, ny fiainana talantalana dia mihoatra ny 36 volana amin'ny fonosana tsy nosokafana tany am-boalohany. Vantany vao nosokafana dia ampiasao haingana ny atiny.
Ny ravina voajanahary voajanahary vita amin'ny vovobony / nalaina ginkgo Biloba
24/6 / 24.0% Flavones 6.0% laktone
Ginkgo (anarana siantifika: Ginkgo biloba) dia hazo mihintsan-dra miaraka amin'ny androm-piainany mihoatra ny 3000 taona. Fantatra amin'ny anarana hoe hazo Gongsun, hazo palmie gana, hazo fono gana, sns, ny voany mitanjaka antsoina hoe ginkgo, ary ny raviny dia antsoina hoe pufan. Ny gymnosperm no karazan-kazo sisa velona amin'ny philum Ginkgo, ary ny karazana hafa rehetra ao amin'ny phylum iray ihany dia nanjary lany tamingana, ka nantsoina hoe "fôsily velona" an'ny fanjakan'ny zavamaniry. Ny fôsily hita dia niverina tamin'ny 270 tapitrisa taona lasa izay. Ny Ginkgo dia novokarina tany Sina ary efa nambolena erak'izao tontolo izao, ary natomboka teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Manana fampiasa maro izy io ary azo ampiasaina ho fanafody sy sakafo nentin-drazana.
1. Ny vovo-dronono ginkgo biloba dia anti-oxidant mandaitra.
2. Azo ampiasaina amin'ny fanoherana ny homamiadana ary hisorohana ny homamiadana.
3. Izy io dia afaka mampiroborobo ny fizotry ny rà serebral sy ny metabolisma sela.
4. Manana ny fihenan'ny tosidra sy ny tavy avo izy io.
5. Manatsara ny ati-doha sy mamelombelona ny ati-doha, manafotsy ary manohitra ny ketrona.
6. Izy io dia mandaitra amin'ny fanaparitahana lalan-dra, mampiroborobo ny fivezivezena ary mampitombo ny tsimatimanota.
1. Ny fitrandrahana ginkgo biloba dia azo ampiasaina amin'ny lalan-drà miitatra, fikambanana endothelialan'ny vaskola voaaro;
2. Ny Ginkgo Biloba Extract dia misy fiasa mifehy ny lipida ra;
3. Ny Ginkgo Biloba Extract dia misy ny fiarovana ny lipoprotein ambany hakitroka;
4. Ny Ginkgo Biloba Extract dia misy fiasan'ny fanatsarana ny rheology amin'ny rà;
5. Izy io dia manana ny asany manakana ny PAF (singa mampihetsi-po amin'ny platelet), ny fanakanana ny fananganana thromboxane;
7. Manana ny fiasan'ny anti-hypoxia izy;
8. Manana ny fiasan'ny spasm artery fisorohana izy.
Manaraka: Mitrandraka tsilo amin'ny ronono
Extra amin'ny sakamalao